Agaasimaha Guud ee Facebook Mark Zuckerberg Oo Dhamaystiray "Jarvis" Software Butler
Mark Zuckerberg ee barnaamijka caanka ah ee maskaxda ku leh barnaamijka "butler" - oo magaciisu yahay Jarvis - ayaa haatan ku jira maamulka, xittaa wuxuu la ciyaaraa qoyskiisa, sida uu sheegay madaxa Facebook.
Zuckerberg wuxuu ka soo horjeeday shaqsigan shaqsiyadeed sannadkan, isagoo ku hawlanaa saacadaha 100 si uu u samaysto habdhaqameedka 'Jarvis' filimka 'Iron Man', oo ah kaaliye daacad ah si uu ula tacaalo unugga qoyskiisa.
"Siyaabaha qaarkood, imtixaankani wuxuu ahaa mid fudud ka badan intii aan filayay," ayuu Zuckerberg ku yiri boggiisa boggiisa oo ku yaala ururka ugu weyn ee dadka.
"Xaqiiqdii, imtixaankaygu waa (aniga oo intaa sii dheer ayaan ku dhajiyay in aan xawilo 365 ee 2016) waxay qaadatay wakhti go'an."
Jarvis ma aha robot jidheed, laakiin halkii codsi Zuckerberg wuxuu ku heli karaa taleefankiisa ama kombiyuutarkiisa si uu u ilaaliyo nalalka, heerkulka, muusikada, amniga, qalabyada iyo taasi oo ah bilowgii hore.
Qalabkani wuxuu u qaataa dhadhankiisa iyo tusaalihiisa, iyo sidoo kale erayo cusub ama fikrado, iyo xitaa geli kara gabadhiisa hal sano jir ah Max, sida Zuckerberg.
Luqadda caadiga ah ee isku diyaarinta iyo waji-celinta aqoonsiga ayaa lagu daray Jarvis, iyada oo awood u siinaysa in ay fahmaan soo-jeedinta la-hadlo ama lagu soo diro oo ay u arkaan ciddii soo saartay, ayuu yiri Zuckerberg.
Alaabta ayaa go'aan ka gaari karta marka uu soo booqdo marka uu soo galo uu yahay mid caadi ah oo u ogolaanaya guriga, halka uu kula talinayo qoyska in qofku taabto salka, sida ku cad boostada.
"Hal xagal oo ahaa mid aad u qosol badan oo aan ka filayey inaan ka mid ahaa waxaan ku biiray oo aan la hadlay aqlabiyad muuqaal ah oo gurigeyga ah," ayuu yiri Zuckerberg.
"Mashiinnada intooda badan lama xiriiraan webka."
Associates, tusaale ahaan, Jarvis ma aha oo kaliya u baahan tahay qalabka guryaha ee lagu xiro internetka, waxay u baahan doonaan inay sii wadaan moodooyinka caadiga ah, sida ay u muujiyeen deeq-bixiyaha Facebook iyo agaasimaha, oo ku soo noqday badeecad uu soo saaro shaqo.
Isagoo u duulaya AI waxa kale oo uu ku booriyay muhiimada barnaamijka dhiirigelinta barnaamijka inuu fahmo dejinta, tusaale ahaan, yaa hadlaya iyo meesha ay joogaan.
"Marka aan ku amro in aan u jeediyo AC (aerating iyo qaboojinta)" xafiiskaygii ", taas oo macneheedu yahay wax aan la mid aheyn markii Priscilla uu si sax ah u ogaanayo," Zuckerberg ayaa yiri, isaga oo isweydiinaya nuskiisa wanaagsan.
"Midkastaa wuxuu abuuray arrimo dhowr ah!"
Mawduucyada isbarbardhigga ah ayaa laga yaabaa inay soo baxaan marka codsanayaan muusigga in lagu ciyaaro iyada oo aan AI loo sheegin qolka, gaar ahaan haddii ilmo nasashadiisu tahay mid isbeddel ah.
Qodobka AI wuxuu leeyahay, wuxuu ka fiicnaan karaa wax ka qabashada wax-qabadka furan, ayuu yiri.
"Hadda, inta badan waxaan u codsanayaa in Jarvis 'ii ciyaaro muusikada qaar' iyo adoo qaadanaya naqshadeyaal hore ee dhagaysiga, taas oo ah qaybta ugu badan ee aan u baahdo in la dhagaysto," ayuu yiri.
Zuckerberg wuxuu sheegay in uu ku fekerayo inuu ka dhaadhiciyo Jarvis isaga oo isticmaalaya "bot" oo uu u shaqeyn jiray Facebook faa'iidada Rasuulka isagoo ka hor imaanaya wax ka qabashadiisa, guud ahaan maaha in uu dadka ka ag dhawaado.
Isagoo la hadlaya AI wuxuu lahaa saameynta maskaxeed ee ka dhigaya in uu u arko in ka badan sidii shakhsi dhab ah, ayuu yiri.
"Markii aan dib ugu soo laabtay codkeyga Jarvis, waxa kale oo aan u baahday in aan ka shaqeeyo jimicsi dheeraad ah," ayuu yiri Zuckerberg.
"Qayb ka mid ah tani waxay hadda la xiriiri kartaa Max oo waxaan ubaahanahay isku xirnaantaas si ay uga qayb galaan iyada, laakiin qayb ka mid ah waxay tahay hadda waxay dareemeysaa sida ay nala heli karto."
Waxa uu ku celceliyay in uu barayo AI is weedaarsi ay ku waydiinayaan cidda ay waajibka tahay in ay wax ka qabato, Jarvis waxay si aan macquul ahayn u qaadataa qof qoyska ka mid ah, oo uu ku jiro ilmaha, si loo bartilmaameedsado.
Zuckerberg wuxuu rabay inuu sii wanaajiyo xoojinta Jarvis, wuxuuna sheegay in uu ka qanciyay waqti kasta oo kale xasuusta cusub ee AI-da cusub ee uu sii wanaajin doono shanta sano ee soo socota ee 10 sano.
"Waxaan jeclaan lahaa in Jarvis ay xakameyso Cunto" Green Green Egg "waxayna iga caawisaa inaan karsado, hase yeeshee taasi waxay si aad ah u jajabineysaa jebinta dhabta ah marka loo eego qoryaha T-shirt," ayuu yiri, isaga oo ku calaamadeynaya magaca caanka ah ee makiinada wax lagu kariyo.
"Waqtiga dheeriga ah, waxaan helayaa laad aan fursad u helin inaan baaro Jarvis si uu u barto awoodiisa cusub halkii aan ka baran lahaa sida loo fuliyo khaladaad gaar ah."
AI waxay ku sii socotaa shakhsiyaadka shakhsiyaadka, iyagoo ka bilaabanaya qalab, tusaale ahaan, Amazon Echo iyo Guryaha Google ee ku xiran aaladaha shakhsi ahaaneed si ay uga jawaabaan su'aalaha iyo xakamaynta qalabka la socda.
Source: NDT Gadget News